Hooyo dishay ilmo ay dhashay oo xabsi lagu xukumay - BBC News Somali
Hooyo dishay ilmo ay dhashay oo xabsi lagu xukumay
24 Maarso 2018
Image caption Hooyo dishay ilmo ay dhashay oo xabsi lagu xukumay
Maxkamad ku taala dalka Fransiiska ayaa sideed sano oo xarig ah ku xukuntay hooyo u dhalatay dalkaasi, kadib markii ay biyaha ku hafisay shan caruur ah oo markaasi ay dhashay. Haweeneydan ayaa sidoo kale meydka caruurta ku qarisay firinjeer ama qaboojiye.
Romana Canete oo ku barooraneysay gudaha maxakamadda ayaa dalbatay cafis, xili xaakimka maxkamadda uu dhageysanayay kiiska Romana.
Dhacdadan aya sannadkii 2015-kii ka dhacday magaalada Bordeaux ee ku taala koonfurta galbeed ee Fransiiska. Hasayeshee laamaha ammaanka ee Fransiiska ayaa baaritaan dheer kadib ogaaday in caruurtaasi la dilay.
Hooyada dhashay ilmaha ayaa sidoo kale sheegtay in ilmaha ay ku dhashay barkad lagu qubeysto oo ku taala gurigii ay deganeyd, kadib na ay halkaasi uga tagtay caruurtii oo ay ku dhinteen.
Mid kamid ah caruurteeda kuwa roon ayaa qaboojiyihii yaalay guriga ku aragtay boorso uu kujiro mid kamid ah caruurta oo meyd ah.
Wakaaladda wararka ee AFP ayaa kusoo warrantay in ciidammada booliska ee dalka Fransiika ay halkaasi ku arkeen ilma yar oo meyd ah oo kujira qaboojiyaha ama firinjeerka, kadib markii seyga Romana uu ku wargeliyay booliska.
Haweeneydan ayaa xabsiga ku qaadan doonto sided sano oo xarig ah iyo shan sano oo kale oo ay qaban doonto howla kale marka laga sii daayo xabsiga.
Ninka qabay haweeneyan oo lagu magacaabo Juan Carlos ayaa waxaa uu sheegay in marnaba uusan ka warhelin in xaskiisa ay uur leedahay, waxaase dacwad oogaha maxkamadda uu sheegay in kiiska lagu soo oogay haweneydani uu yahay inay diiday in caruurteeda ay siiso xuquudii hooyanimo ee ay ku lahaayeen.
Ilaa iyo hada lama garanayo waxa haweeneydani ku qaaday inay disho ilmihiiay dhashay.